2020 မှာရောင်းအား ထင်သလောက် မကောင်းခဲ့ပေမယ့်လည်း ဥရောပဈေးကွက်ကို ဆက်လက် တင်ပို့ ဦးမယ့် Subaru ! – MyMedia Myanmar
2020 မှာရောင်းအား ထင်သလောက် မကောင်းခဲ့ပေမယ့်လည်း ဥရောပဈေးကွက်ကို ဆက်လက် တင်ပို့ ဦးမယ့် Subaru !
၂၀၂၀ ခုနှစ်ကတော့ အရာရာ တိုင်းအတွက် ခက်ခဲခဲ့ရတဲ့ နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ဘေး ကြောင့်ပဲ ကားကုမ္ပဏီ တွေလည်း အထိနာခဲ့ရ ကာ ဒီအထဲမှာမှ Subaru ရဲ့ ဥရောပ ‌ဈေးကွက် အခြေအနေက ပိုဆိုးလို့ နေခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ အများစုကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်မှာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေကို ဖာထေးရင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့ကြရပေမယ့် Subaru ဘက်ကတော့ ရောင်းအားဆိုင်ရာအချက် အလက်တွေကို ဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိပဲ အမှန်အတိုင်း ချပြခဲ့ပါတယ်။ Autocar နဲ့ အင်တာဗျူး တစ်ခုမှာတော့ Subaru ရဲ့ UK Operations ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ က ဖြေကြားရာမှာ ၂၀၂၀ ဟာ မယုံနိုင်လောက်စရာ ‌ဈေးကွက်အတွင်း ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်တွေနဲ့ အတူ ရူးသွပ် စရာ နှစ်တစ်နှစ်ပါပဲလို့ အခိုင်အမာဆိုခဲ့တာပါ။ အထူးသဖြင့် John Hurtig ရှင်းပြခဲ့ရမှာတော့ အခုလို ဝယ်လိုအားတွေဆက်တိုက် ကျဆင်း ခဲ့ရခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းပြချက် ကတော့ ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရောဂါ ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပြီး Lockdown တွေ ကြောင့်လည်း ဝယ်ယူလိုသူတွေ ဘက်က ဝယ်လိုအားတွေ ကျဆင်း ခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မနှစ် က ရောင်းအား ကျဆင်းရခြင်းရဲ့ နောက်ထပ် အဓိက တရားခံ လို ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းခြင်းရာ တစ်ရပ် ကတော့ ၂၀၁၉ နှစ်ကုန် ပိုင်းလောက်မှာ Subaru ဘက်ကနေ ကားအမျိုးအစား အတော် များများ ကို Pre Register လုပ်ထားခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ထားခဲ့ခြင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ လ ၂၀၂၀ မှာ ဥရောပသမဂ္ဂက တင်းတင်းကြပ်ကြပ်သတ်မှတ် လိုက်တဲ့ ကာဗွန် ထုတ်လုပ်မှု လျှော့ချရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း အသစ် တွေ ကြောင့် ထိခိုက် ခဲ့ရပါသေးတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ နှစ်ကုန် ပိုင်းလောက်မှာ အကြို မှတ်ပုံတင် ခဲ့တဲ့ ကားတွေက EU ရဲ့ ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှု ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ မကိုက်ညီတာကြောင့်ပဲဒဏ် ကြေးတွေ အများအပြား ဆောင်ခဲ့ ရတဲ့ အဖြစ်တွေကို ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Hurtig ရဲ့ ရှင်းပြချက် အရတော့ အခုလိုမျိုး ကားတွေကို Discount နဲ့ မနှစ် က နှစ်ကုန် ပိုင်းလောက်မှာ အကြို ရောင်းချ ခဲ့ခြင်းဟာ ရောင်းအားကိုအတော်လေးကိုပဲ အထိအခိုက် ရှိစေခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မနှစ် တုန်းက UK ဈေးကွက် ထဲမှာ ဆိုရင် Subaru ဟာ ကား အစီးရေ ပေါင်း ၉၅၁ စီးပဲ တင်ပို့ ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နဲ့ ယှဉ်မယ် ဆိုရင် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၆၈ ရာနှုန်း လောက် အထိကို ကျဆင်းခဲ့ရတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြားသော ပြိုင်ဘက် ကား ကုမ္ပဏီ တွေနဲ့ ယှဉ်မယ် ဆိုရင် Subaru ဟာ အွန်လိုင်းပေါ် စတင် ရောင်းချတာ နောက်ကျတယ်လို့ ဆိုလို့ရပြီး ဒီ အချက်ကြောင့်ပဲ တစ်ချို့ သော ရောင်းအားဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးတွေကို လက်လွတ်ခဲ့ရတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ အဆိုပါ အခြေအနေတွေကို ဖြေရှင်း ပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပြီး စီမံ ခန့်ခွဲမှု အပိုင်းတွေ ကိုလည်း ပိုမိုတိုးတက် အောင် လုပ်ဆောင် ထားနိုင်တာ ဖြစ်ကာ ထုတ်ကုန် အသစ် အဆန်း တွေကိုလည်းအမြဲတမ်း ဆန်းသစ်တိကျနေအောင်ပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ XV ၊ Forester နဲ့ Outback တို့ရဲ့ နောက် ဆုံး မျိူးဆက်သစ် ကားတွေကိုလည်း ဥရောပ ဈေးကွက် အတွင်း ပြန်လည်တင်ပို့ ရောင်းချမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပြီး ဈေးကွက် ရောင်းချရမှု အနေအထား ကိုလည်း ပြန်လည် ထိန်းညှိ နိုင်ဖို့ အတွက် အထောက် အကူ ပြုပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဒုတိယမြောက် မျိုးဆက် ဖြစ်မယ့် BRZ Sports Aar အတွက်ကတော့ ဥရောပ ဈေးကွက် အတွက် ကို ရွေးချယ်စရာ မရှိ တဲ့ အနေအထား တစ်ရပ် မှာပဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ Hurtig ရဲ့ ပြောကြား ချက် အရတော့ ကုမ္ပဏီ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ မှာ ဥရောပ အတွက် တကယ်ကိုဆိုးရွားခဲ့တဲ့ ဈေးကွက်ဖြစ်ပေမယ့်လည်းလာမယ့်နှစ်သစ်မှာ ဆိုရင်တော့ တကယ်ကိုအကောင်းမြင်တဲ့ ရောင်းအားနဲ့ အာမခံချက် ရှိရှိ ပြန်လည်ပြီး ရောင်းအားမြှင့်တင် ပေးလာမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထား ပါတယ်။ သေချာတာ ကတော့ အခုလို ပြန်လည် ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ထားမှုတွေ နဲအတူ ကုမ္ပဏီ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ က အကြောင်းအရာ တွေ ကို မေ့ပစ်ခဲ့ ဖို့ ကြိုးစားတော့ရမှာ ဖြစ်ပြီး အနာဂါတ် အတွက် ကိုပဲ ကောင်းကောင်း အာရုံစိုက် ရတော့မှာဟာ ပိုပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ လက္ခဏာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဥရောပမှာ Subaru ဟာ တကယ် ကို ‌ဈေးကွက် ဝေစု အရပါသေးငယ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ အသစ် ချမှတ်ထားတဲ့ ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှု ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက် တွေကိုတော့ အရမ်းကြီး အလေးပေးပြီး လုပ်ဆောင်စရာတော့ မလိုလောက်တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post 2020 မှာရောင်းအား ထင်သလောက် မကောင်းခဲ့ပေမယ့်လည်း ဥရောပဈေးကွက်ကို ဆက်လက် တင်ပို့ ဦးမယ့် Subaru ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-26T15:00:37+06:30January 26th, 2021|MYCARS MYANMAR|
တစ်ပတ်ရစ် ကားတွေထဲ မာစီးဒီးထက်ပင် ဈေးပိုကြီးနေတဲ့ Nissan !
2022 Subaru WRX ပွဲထွက်လာမယ့် ရက်အတိအကျ ထွက်ပေါ်လာ !
အမေရိကအတွက် မျှော်လင့်လို့ရတာလဲ BMW iX !
Tundra အသစ် ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် အဆန်းတွေ ကို ကြိုတင်ချပြလာတဲ့ Toyota!
ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ လျှပ်စစ်ကားအသစ်တွေကြောင့် ဈေးကွက် ဝေစုတွေ ဆုံးရှုံးလာနေတဲ့ Tesla!
တစ်မူထူးခြားတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ မြင်တွေ့လာရတဲ့ 2022 Hyundai Custo Minivan!
မောင်းသူမဲ့ ကားတွေ အတွက် အတွင်းခန်း ဒီဇိုင်းဆန်းတွေ ကို စိတ်ကူးနေတဲ့ Porsche !